﻿	မုန့်ဖုတ်သော့ Lime Pie မပါ ၀ င်ပါ။ - ချက်ပြုတ်နည်းများ
ဘယ်မှာ7အလွှာသို့ကျဆင်းလာဝယ်ဖို့
Pecan Pie ဘယ်လိုပြောရမလဲ
မုန့်ဖုတ် Key ကိုထုံး Pie
မုန့်ဖုတ် Key ကိုထုံး Pie အနည်းဆုံးပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုပြီး ၁၅ မိနစ်အတွင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဖြစ်သည်။ ဂရေဟမ် cracker အပေါ်ယံလွှာအံ့သြဖွယ်အရသာပေါင်းစပ်ဖန်တီးရန်ချိုမြိန်ခြင်းနှင့် tangy ထုံး cheesecake အဆာနှင့်ပြည့်စုံသည်။
Philly ဒိန်ခဲကင် casserole နှေးကွေး cooker
ပူပြင်းသည့်နွေရာသီကာလများ၌မုန့်ဖုတ်မပါသောအချိုပွဲများသည် အဘယ်သူမျှမ - Bake သံပုရာဒိန်ခဲ နှင့် အဘယ်သူမျှမ Bake စတော်ဘယ်ရီ Pie ပြီးပြည့်စုံတဲ့အားရစရာရှိပါတယ်။
ဟယ်လို! Valentina ဟာကျွန်မအကြိုက်ဆုံးအိမ်လုပ် Key Lime Pie Recipe ကိုဝေမျှနေပါတယ်။
သော့ Lime Pie
နွေရာသီအပြင်းအထန်နှင့်အတူ, အဘယ်သူမျှမ - မုန့်ညက်အချိုပွဲငါတို့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ကြသည်။ ကလေးငယ်များနှင့်လူကြီးများရောသူတို့အတွက်ပါအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။ မုန့်ဖုတ်အချိုပွဲမရှိပါ အစဉ်အမြဲအနိုင်ရ, အထူးသဖြင့်ဒီ key ကိုထုံးပိုင်စာရွက်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ zest နှင့်သံပုရာဖျော်ရည်များမှချိစ်ကိတ်မုန့်သည်နို့ရည်၏ချိုမြိန်မှုနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် ၀ င်ပေါက်တိုင်းကိုအံ့သြဖွယ်အရသာများစွာကိုပေးသည်။
ငါသည်ဤလွယ်ကူသောသော့ key ကိုထုံးပိုင်စာရွက်လုပ်သည့်အခါတိုင်း, ငါတို့အနိုင်နိုင်ကသတ်မှတ်ထားဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်ပေးကြောင့်သွားကြောင်းပါပဲ။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးနွေရာသီအချိုပွဲများထဲမှတစ်ခုပါ! ၎င်းသည်မဖုတ်ရသည့်အချိုပွဲဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်အရသာကင်းမဲ့သည်။
လွယ်ကူနှေးကွေး cooker Salisbury ကင်စာရွက်
Bake Key Lime Pie မဖုတ်ရန်
အပေါ်ယံလွှာ: သင်စတိုးဆိုင် ၀ ယ်ထားသောအပေါ်ယံလွှာကိုအစားထိုးနိုင်သည်ဖြစ်သော်လည်းဤအိမ်လုပ်အပေါ်ယံလွှာကိုပြုလုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည် (ကလေးများကကူညီခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်) ။
အာဟာရများကိုထိန်းသိမ်းရန် beets ကိုချက်ပြုတ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းဖြစ်သည်
ဂရစ်ဟမ် crackers တွေကိုဇစ်ထိပ်အိတ်ထဲမှာဖိပြီး pin (သို့) အစာစားစက်နဲ့နှိပ်ပေးပါ။
ဖြည့်စွက်: ဤသည်လွယ်ကူသောအဆာရုံ5ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ဖွဲ့!
ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများကို creamy အထိပေါင်းစပ်။ အပေါ်ယံလွှာအပေါ်အညီအမျှပျံ့နှံ့နိုင်သည်
ထုံး zest, ကြာပွတ်မုန့်သို့မဟုတ်ထုံးချပ်နှင့်အတူထိပ်တန်း။
အမှုန့်ကိုမ ၀ င်ခင်ရေခဲသေတ္တာထဲ၌အနည်းဆုံး ၄ နာရီအေးအောင်ထားပါ။
သိကောင်းစရာများ - သပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့်ပိုင်အပိုင်းအစများဖယ်ရှားရန်အတွက်ဒယ်အိုးအောက်ခြေတွင်သားရေစာစက္ကူထည့်ပါ။ သန့်ရှင်းသောအချပ်အဘို့, ဖြတ်တစ်ခုချင်းစီကိုအပြီး, နွေးရေအောက်မှာဓား။
အဆိုပါပိုင်ကိုဖုံးအုပ်ထားနိုင်ပြီး 2-3 ရက်အတွင်းအအေးခံနိုင်သည်။ အပေါ်ယံလွှာကြာကြာသိုလှောင်ထားသည့်ပျော့ပြောင်းလာလိမ့်မည်။
အေးလျှင်, ဒီပိုင်သည် ၂-၃ လအထိကောင်းကောင်းခံနိုင်သည်။ အအေးခံထားသောသော့ခတ်ထားသောပေါင်မုန့်ကိုအအေးခန်းတွင်ညအိပ်။ အမှုမထမ်းခင်လိုချင်သောပစ္စည်းအပါအ ၀ င်ထိပ်တွင်ထားပါ။ ဤသည်သော့ထုံးပိုင်အချိုပွဲသည်ပါတီပွဲတစ်ခုအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အစောပိုင်းကဖုတ်ခြင်းကိုစတင်လိုလျှင်ပြုလုပ်ရန်ခဲယဉ်းစေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သိကောင်းစရာ - အေးခဲသောသော့ထုံးစက်သည်နွေရာသီပူပြင်းသည့်နေ့များတွင်အေးအေးဆေးဆေးအေးအေးဆေးဆေးတစ်ဝက်အေးခဲစေရန်အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပိုအရသာကောင်းသောအဘယ်သူမျှမ - မုန့်ညက်အချိုပွဲ
Cream ဒိန်ခဲသစ်သီးဖျော်ရည် - ပါဝင်မှု ၂ ခုသာရှိသည်။
အဘယ်သူမျှမ Bake က Black Forest Cheesecake - ချောကလက်ချစ်သူများအတွက်
Oreo No Bake ဒိန်ခဲ - အလင်း၊ fluffy နှင့် creamy တို့ဖြစ်သည်။
အဘယ်သူမျှမဖုတ် fluffy ဒိန်ခဲရင်ပြင်မရှိပါ - ၁၀ မိနစ်အတွင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။
Pistachio Icebox ကိတ်မုန့်မရှိပါ - ရှေ့ဆက်လုပ်ကောင်းတဲ့
မုန့်ဖုတ် Key Lime Pie စာရွက်မရှိပါ
ပြင်ဆင်ချိန်နှစ်ဆယ် မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်0 မိနစ်များ အေးအချိန်၄ နာရီ စုစုပေါင်းအချိန်နှစ်ဆယ် မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၁၂ စားသုံးခြင်း စာရေးသူValentina ablaev Bake Key Lime Pie Recipe သည်အနည်းဆုံးပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုပြီး ၁၅ မိနစ်အတွင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။ ချိုမြိန်ပြီး tangy ထုံးဒိန်ခဲအသားဖြင့်ဖြည့်ထားသောဂရေဟမ်ကြက်ကွဲသည်အရသာထူးခြားသည့်ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢1 ⅔ ခွက် ဂရေဟမ် ကြိုက်တယ်
▢၈ ဇွန်း unsalted ထောပတ် အရည်ပျော်
▢၁၆ အောင်စ ဒိန်ခဲမုန့် ပျော့ပျောင်းသည်
▢၁ ခွက် နို့ဆီရည်ချို
▢⅓ ခွက် ထုံးဖျော်ရည်
▢၁ ဇွန်း ထုံး zest
▢¼ ခွက် သကြားဓာတ်
ပန်းကန်လုံးထဲ၌ကြိတ်ထားသော graham crackers နှင့်အရည်ကျိုထားသောထောပတ်တို့ကိုပေါင်းစပ်ပါ။9'pie ပန်းကန်၏အောက်ခြေနှင့်နှစ်ဖက်သို့ခိုင်မြဲစွာနှိပ်ပါ။
နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသောမုန့်ဒိန်ခဲကိုနို့ရည်၊ ထုံးဖျော်ရည်၊ သကြားနှင့်ထုံးရည်တို့နှင့်ရောနှောပြီး creamy နှင့်ကောင်းစွာပေါင်းထည့်သည်အထိပြုလုပ်ပါ။
အပေါ်ယံလွှာကျော်ချိစ်ကိတ်မုန့်ကိုအမှုန့်ကိုငါသွန်းလောင်း။ အညီအမျှပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်အနည်းဆုံး4နာရီ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ညအေးခဲ။
ထုံးကျောက်, ထုံး zest, ဒါမှမဟုတ်ကြာပွတ်မုန့်နှင့်အတူလိုချင်သောအဖြစ်အပါအ။
သော့ချက်စာလုံးKey Lime Pie၊ မုန့်ဖုတ်၊ သင်တန်းအချိုပွဲ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။